कर्णालीमा प्रदेश सरकारले विश्वासको मत पायो - Lekhapadhi पढ्न छुटाउनु भयाे की ! : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
कर्णालीमा प्रदेश सरकारले विश्वासको मत पायो
लेखक : लेखापढी ४ बैशाख २०७८, शनिबार ००:१६ मा प्रकाशित
काठमाडौं । ३ वैशाख
कर्णाली प्रदेश सरकार विश्वासको मत प्राप्त गरेको छ । प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेर सरकार ढल्ने र आफ्नो सरकार बन्ने भनेर मख्ख भएको नेकपा (एमाले) को चाहनालाई आफ्नै पार्टीका माधव नेपाल पक्षका सांसदले फ्लोर क्रस गरेर असफल बनाइदिए । आज मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा २२ र विपक्षमा १५ मत खसेसँगै प्रदेश सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरेको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई हटाउन नेकपा (एमाले) को प्रधानमन्त्री ओली पक्षले पहिल्यै पनि प्रयास गरेपनि माधव नेपाल पक्षले त्यो योजना असफल पार्दै आएको थियो । आज मुख्यमन्त्री शाहीलाई नेपाली कांग्रेसका ६ र नेकपा (एमाले) का ४ सांसदले विश्वासको मत दिएर सरकार बचाइदिए ।
यस घटनासँगै नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) भित्रको माधव नेपाल पक्षबिच सहमति निर्माण भएर राष्ट्रिय राजनीतिमै नयाँ गठबन्धनको प्रारम्भ भएको छ । नेपाली कांग्रेस प्रारम्भमा तटस्थ बस्ने मनस्थितिमा रहेपनि पछि माओवादी केन्दलाई साथ दिएको थियो । कर्णालीमा भएको सहमति केन्द्र स्तरमा उच्च नेताहरू बिचको सल्लाहबाट भएको थियो । यो सहमतिका असर अन्य प्रदेशका साथै केन्द्र स्तरमा पनि देखिने सम्भावना बढेको छ । कर्णालीमा आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश ज्वालाको नेतृत्वमा फ्लोर क्रस भएको छ ।
चार सांसदलाई कारवाहीको सिफारिश, एकलाई स्पष्टिकरण माग
नेकपा (एमाले) कर्णाली प्रदेशको बैठकले पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्ने चार सांसदलाई कारवाहीको सिफारिश गरेको छ । बैठकले चारै जनाको सांसद पद निलम्बन गर्ने र पार्टीको साधारण सदस्यता समेत खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । कारवाहीमा पर्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदमा प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाही रहेका छन् । चारै जनाले महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।
त्यसरी नै समानुपातिक सांसद देवी वलीलाई चौबिस घन्टाभित्र स्पष्टिकरण माग गरिएको छ । उनले पहिले विश्वासको मतमा मतदान गरेपनि पछि आवश्यक संख्या पुगेको भन्दै आफ्नो मत सच्चाएकी थिइन् । नेकपा (एमाले) को संशोधित विधानले तत्काल कुनै निर्णय लिँदा पार्टी र संसदीय दललाई गम्भीर क्षति हुने देखिएमा संसदीय दलको नेताले सांसदलाई निलम्बन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
हाम्रा धर्म संस्कृतिः साँझा सम्पत्ति
डनलाई कथापात्र बनाउँदाको थ्रिल !
दुई/तीन हप्तामा स्वीकृति, आठ महिनाभित्र सर्वसाधरणले पाउन सक्ने
आज नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचन हुँदै
नन्दु उप्रेतीको नियात्रा–प्रेमपूर्ण सम्झना प्रिय प्रेमसिंह
नेपालबाट संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाइएकोमा विरोध
प्रलेसका बहुमत लेखकद्वारा प्रतिगमनको विरोध